YEYINTNGE(CANADA): Sunday, December 12
မင်းဆီသက်ရောက်ဖို့ ၊ ငါ့မှာမေးရိုးရှိတယ်။
ခုတော့မင်းမှာမေးရိုးမရှိပဲ မင်းလက်သီးတွေ ငါ့အပေါ် လာလာသက်ရောက်နေတာ
( ကဗျာဆရာ-မောင်ချောနွယ် )
အန်တီစုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်လာတော့ကြားလိုက်ရတဲ့စကားတွေကကြက်သီးမွေးညှင်းထလောက်စရာ၊ “ ကျမကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့သူတွေကိုကျမအာဃာတမထားပါဘူး ”တဲ့ ၊ ကိုယ့်အပေါ်ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ထားတဲ့သူတွေအပေါ်ကျနော်တို့သာဆိုရင်ဒီလိုစကားမျိုးပြောထွက်နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ သေချာတယ်။ ကျနော်ပြောမထွက်ဘူး ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျနော် အန်တီစုလောက် စိတ်ထားမကြီးကျယ် မမြင့်မြတ်လို့ဆိုတာသေချာတယ်၊ အာဃာတ မဟုတ်ရင်တောင်မှ မကျေနပ်မှု့လောက်တော့ရင်ထဲကျန်နေဆဲပဲ။ စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာ အာဃာတတို့၊ပျော်ရွှင်ခြင်း၊၀မ်းနည်းခြင်း၊ကြောက်ရွှံ့ခြင်းဆိုတာတွေဟာဒေါသစိတ်တွေပဲလို့မှတ်သားဘူးတယ်။
ဒေါသကြီးလေ အကြောက်တရားကြီးလေပဲတဲ့..ထို့နည်းတူ အကြောက်ကြီးလေ.. ဒေါသကြီးလေပဲတဲ့။
ဒီလိုခံနိုင်ရည်နဲ့ မိမိရဲ့ အာဃာတ တရားတွေကိုပယ်ဖျောက်ပြီး မိမိကိုရက်စက်ခဲ့တဲ့ သူတွေကိုတောင်မှ အကောင်းမွန်ဆုံးပြန်လည်ဆက်ဆံတတ်တဲ့လူတွေထဲမှာတောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာ သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ကင်ဒေးဂျုံရယ်အန်တီစုရယ်ကိုတော့ကျနော့်ဘ၀မှာအလေးစားဆုံးနဲ့စံနမူနာအယူ ထိုက်ဆုံးသူများအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ကင်ဒေးဂျုံဆိုတာ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှာ တချိန်က အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ ( အခု အန်တီစုလိုပေါ့ )။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပတ်ချုံဟီးဆိုတာ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ရှန်းရှန်းတောက် စစ်အာဏာရှင်ကြီး ( အခု ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေလို)၊ပတ်ချုံဟီးအာဏာရှိနေစဉ်မှာအတိုက်အခံကတွေကိုရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာ၊ ဒီအထဲမှာကင်ဒေးဂျုံဆိုဘယ်လောက်ခံရသလည်းဆိုတော့သူ့ကိုအလုံပိတ်သေတ္တာထဲကြိုး တွေနဲ့တုတ်ထဲ့ပြီး ပင်လယ်ထဲကိုတောင် မြုတ်သတ်ခါနီးဆဲဆဲ အမေရိကံ ထောက်လှမ်းရေး စီအိုင်အေ ကတဆင့် အမေရိကံအစိုးရကသိသွားတယ်။ ချက်ခြင်းပဲ လှမ်းပြီး အကြောင်းကြားလိုက်တယ် ကင်ဒေးဂျုံကိုသာသတ်ဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကံနဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာထိခိုက်နိုင် စရာရှိပါတယ်ဆိုမှ မသတ်တော့ပဲ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ပြန်ထဲ့ထားလိုက်တယ်။ နောက်ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်တခုကတော့ကင်ဒေးဂျုံကိုကားနဲ့တိုက်သတ်တာ၊ဒါလည်းမသေဘူးဒါပေမဲ့ခြေထောက်ပြင်းပြင်းထံထံကျိုးသွားတယ်။ သမ္မတဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူလမ်းလျှောက်တာသတိထားကြည့်မိတော့နည်းနည်းထော့နင်းထော့နင်းဖြစ်နေတယ်။အဲဒါစစ်အာဏာရှင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးပတ်ချုံဟီးလက်ချက် တွေပေါ့၊ဘယ်လောက်ရက်စက်ခဲ့သလည်းစဉ်းစားသာကြည့်ကြပါ၊ကြောက်စရာကောင်းလောက် အောင်ကိုရက်စက်ခဲ့တာပါ၊ပတ်ချုံဟီးလည်းသူပြုသမျှသူခံဆိုသလိုသူ့လက်အောက်ကအားအကိုးရ ဆုံး အရင်းနှီးဆုံး ထောက်လှမ်းရေးမှုးချုပ်က ဧည့်ခံပွဲမှာ သေနပ်နဲ့ပစ်သတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီမှာတင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာရှင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးပတ်ချုံဟီးဘ၀နိဌိတံအဆုံးသတ် သွားတော့တာပါပဲ။ကင်ဒေးဂျုံနိုင်ငံရေးဘ၀စာမျက်နှာတွေမှာသေဒဏ်အထိပြင်းထံတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေ၊ တခြားနိုင်ငံထိသွားရောက်နေထိုင်နေရတဲ့ပြည်နှင်ဒဏ်တွေ၊လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု့တွေ၊အနိမ့်ဆုံးအိမ် တွင်းနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀တွေနဲ့ခါးသီးဖွယ်ရာကျော်ဖြတ်လာခဲ့ရတာပါ၊
သို့သော် ကင်ဒေးဂျုံဟာ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန် တနေ့မှာ ပတ်ချုံဟီးရဲ့ဂူဗိမာန်ကိုသွားရောက်ဂါရ၀ပြုတယ်၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပတ်ချုံဟီးရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်စွမ်းဆောင်ချက်တွေထဲက ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုထုတ်နှုတ်ချီးမွန်းခဲ့တယ်၊သူဟာ အဆက်ဆက်သော တောင်ကိုးရီးယားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ထားချက်များကို လက်ဆင့်ကမ်းဆောင်ရွှက်နေသူတစ်ယောက်ပါတဲ့၊
(စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ညှင်းစဲမှု့တွေကိုတလုံးတပါဒမျှဖွင့်ဟမသွားခဲ့ဘူး)၊ ပြီးတော့ အလေးပြုတယ်၊ ပတ်ချုံဟီးရဲ့ ဂူဗိမာန် လိုအပ်ချက်အတွက် အလှုငွေထဲ့ဝင်ပေးခဲ့တယ်၊ ပြန်အထွက် သတင်းထောက်တွေက သူ့ကိုမေးတဲ့အခါ…………..
“ သမ္မတကြီးခင်ဗျား.. သမ္မတကြီးကို အခုလိုရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်ခဲ့သူတစ်ယောက်အပေါ် ကလဲ့စားချေခြင်စိတ်၊ အဃာတ တရားတွေမရှိပဲ သဘောထားနိုင်တာဟာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ” ဆိုတော့
“ ကျနော် နိုင်ငံရေးလုပ်တာ.. ကလဲ့စားချေဘို့ နိုင်ငံရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး… တိုင်းပြည်တိုးတက်ဘို့်လုပ်တာ ကလဲ့စားအပြန်အလှန်ချေမှုန်းနေခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်မလာဘူး.. ဆုတ်ယုတ်သွားဘို့ပဲရှိတယ်. နောက်ပြီး .. ဒီကိစ္စတွေဟာဘယ်တော့မှပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူး သံသရာလည်နေမှာပဲ ”ဆိုပြီးပြောအပြီးမှာတော့သမ္မတကြီးကင်ဒေးဂျုံဟာခြေထောက်ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့ ပရိတ်သပ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပရိတ်သပ်တွေအထဲမှာ ပတ်ချုံဟီးရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များ ပါရှိတယ်၊ အားလုံး အားလုံးဟာ တိုင်ပင်မထားပဲ မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ်စီးကျလာကြတယ်၊ ပရိတ်သပ်ကြီးလည်းထိုနည်းတူစွာပါပဲ။ ချက်ခြင်းဆိုသလို အဲဒီသတင်းကို ထုတ်လွှင့်လိုက်တော့ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာ သမ္မတကြီးအပေါ် ကရုဏာတွေသက်ဝင်သွားပြီး ပြည်သူတယောက်ကဆိုရင် “ ကျမ သမ္မတကြီးကို အရင်ကထက်ကိုပိုလို့လေးစားသွားပါပြီရှင်သူဟာကျမတို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဘို့ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့မကောင်းစိတ်ဆိုတာ လုံးလုံးကိုမရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ပြောခြင်ပါတယ်.. အငြိုးတွေ၊ အာဃာတတွေနဲ့တန်ပြန်နေမယ်ဆိုရင်..အဆိုးသံသရာကြီးထဲကကျမတို့ဘယ်လို ရုန်းထွက်ကြတော့မှာလည်း ”ဒါ့ကြောင့် ထူးခြားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာ ထူးခြားတဲ့ အမူအကျင့်တွေရှိတယ်၊ သာမာန် လူပုဂ္ဂိုတို့ကျင့်နိုင်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ အန်တီစုဆို ကျနော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အမျိုးမျိုးလုပ်ကြံမှု့တွေနဲ့ သေမင်းထံက အခေါက်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ရပြီ၊ ( မပြောကောင်းမဆိုကောင်း ) နောက်ရောဘယ်လိုများကြုံတွေ့ရပါဦးမလည်း၊ စိုးရိမ်စရာပါ၊ လက်ရှိ စစ်ခေါင်းဆောင်အပါဝင် တော်တော်များများရဲ့စိတ်ကဆတ်ဆတ်ထိမခံ၊ကိုယ်စိတ်နှလုံးနဲ့အကြမ်းဖက်တုန့်ပြန်မှု့ ကိုဝန်မလေးတတ်ကြသူတွေပါ၊ ကျနော်ကြုံခဲ့ရတာလေးဖောက်သည်ချခြင်သေးတယ်…. ဒီလိုပါ…………
ကျနော် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဘ၀နဲ့ ထောင်တထောင်မှာနေနေရတဲ့ အချိန်၊ စစ်တပ်က အရာရှိကြီး တချို့ထောင်ကျလာတယ်။ သူတို့ကို သာမာန် ရာဇ၀တ်သားတွေထားတဲ့နေရာမှာလည်း ထားလို့ကမရ ( အရာရှိကြီးကြောင့်ဆိုပြီးတော့ တော့မဟုတ်ပါဘူး ရာဇ၀တ်သားများက ရိုက်သတ်ပစ်မှာဆိုးလို့ပါ ) အဲဒါ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများထားရာနေရာမှာလာထားတယ်။ ထောင်ကလည်းအရမ်းသေးဆိုတော့ တခြားနေရာလည်းသွားထားစရာက မရှိဘူးလေ၊ ကျနော်တို့ဆီလာထားပေမဲ့ကျနော်တို့ကမဖွယ်မရာမဆက်ဆံပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်
အလှန်လေးစားမှု့တွေနဲ့ဆက်ဆံကြပါတယ်။တနေ့ ထောင်ပိုင်လှည့်လည်စစ်ဆေးတော့ အရာရှိကြီးတယောက်ကို ထောင်ပိုင်က ပြောတယ်…
“ ခင်ဗျားတို့ ဒီနေရာ နယ်နမိတ်ကနေကျော်ပြီး အပြင်မထွက်ပါနဲ့.. အန္တယာယ်ရှိလို့ပါတဲ့ ” ပြောသွားတာဒါလေးပါပဲ၊ တကယ်တော့ ထောင်ပိုင်အနေနဲ့ပြောသင့်တဲ့စကားပါ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့က ကျနော်တို့နေရတဲ့ ပရ၀ဏ် အပြင်ဘက်ကိုထွက်ထွက်ပြီး စကားတွေပြော၊ ပစ္စည်းအပေးယူတွေလုပ်နဲ့ဆိုတော့ ၊ သူတို့ကို မုန်းတဲ့သူတယောက်ယောက်က တခုခုလုပ်လိုက်ရင် ထောင်ပိုင်မှာပါ လာပြသနာတက်မှာလေ……ထောင်ပိုင်ပြောသွားတာကလည်း လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောသွားတာပါ.. ထောင်ပိုင်လည်းပြန်သွားရော..
“ ဒီကောင်လူပါးဝါးတယ်… ငါတို့ ဘာရာထူးအာဏာမှမရှိတော့လို့ စော်ကားတာ.. တွေ့မယ်..ငါတို့မှာရာထူးအာဏာမရှိတော့ပေမဲ့လို့.. အစွယ်တော့ကျန်သေးတယ်..တွေ့မယ် ” အသားတွေတောင်တဆတ်ဆတ်တုန်လို့.. ကြိမ်းလိုက်ဝါးလိုက်တာ နေ့စဉ် အစားသောက်တောင်မစားနိုင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်သွားတာ.. တော်တော်စိတ်ထိခိုက်သွားပုံရတယ်။ မတော်ဆို ကျနော်တို့လာပြောကြည့်ပါ့လား.. မသွားနဲ့ဆို မသွားဘူးပေါ့ ဒါစည်းကမ်းပဲ၊ ထောင်ပိုင်ပြန်မသွားခင်တောင် သူပြောတာ သတိရမှာမဟုတ်တော့ဘူး.. စိတ်ထဲကပျောက်သွားမှာအသေအချာပဲ၊ဘာမှခံစားနေရမဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါမျိုးအဖြစ်ပျက်က ဒီတစ်ကြိမ်းလားဆိုတော့ -- မဟုတ်ဘူး ခနခနကိုတွေ့ဘူးတာ အပြင်လောကရောက်ပြန်တော့လည်းတွေ့ဘူးတာပဲ၊ သူတို့က သူတို့ အလှည့်ရောက်ရင် မခံနိုင်ဘူး အားလုံးက ပုံစံခွက်ထဲက ထုတ်လိုက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများလို.. အတူတူပဲ၊ သူတို့ရဲ့စိတ်တွေက အရမ်းထိခိုက်ရှနာလွယ်တယ်၊ စောစောကပြောခဲ့တဲ့ အရာရှိကြီးဆို သူတာဝန်ခဲ့ယူခဲ့တဲ့ အချိန်က လူတွေအပေါ်တော်တော်ကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတယ့် အသံတွေလည်းပြန်ကြားရပါတယ်။
ဒေါသကြီးရင်.. အကြောက်လည်းသိပ်ကြီးတယ်တဲ့.. စိုးရိမ်စိတ်လည်းသိပ်ကြီးတယ်၊ ဒီလိုလူတွေက စိတ်အတက်အကျလည်းသိပ်မြန်တတ်တယ်၊
တခါ တလောက ဖေ့ဘွတ်ကနေတဆင့် အုတ်အုတ်ကြွက်ကြွက်ဖြစ်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့ဗွီဒီယိုခွေ ပြန့်နှံ့သွားတော့ ကျနော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးတော်တော်များများလည်း သိနေပြီးသားပါ၊ သူ့ပုံက စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ လက္ခဏာသွယ်ပြင်ပုံသဏ္ဍန်တွေတွေ့နေရပါတယ်။ တချိန်က ကျနော်တို့ကို သူ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ နှိပ်စက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အာဃာတရားကိုဘေးဖယ်ပြီးလူသားတစ်ယောက်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆို ရင်တော်တော်သနားစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းပါ၊တခြားဟာသနားတာထက်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူ့ပုံစံကိုပါ၊ တဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ရအောင် အန်တီစုလည်း သူ့လို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့နေနေရတာ သက်တမ်းအားဖြင့် သူ့ထက်ကြာပါတယ်၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ခြင်း အတူတူ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုကွာခြားသွားတာပါလိမ့် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်…. စေတနာနဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု့တွေက ကွာသွားလို့ပါ၊ အရာရာကိုပေးဆပ်ဘို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အန်တီစုအနေနဲ့က စွန့်လွှတ်ရတယ်ဆိုတာ သေးဖွဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပါပြီလေ၊ စိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကိုက… လောဘနည်းသွားပြီ… လောဘနဲတော့ ဒေါသလည်းနဲသွားပြီ..အဲဒီဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွေအရ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းခြင်းတွေ၊၀မ်းနည်းခြင်းတွေ၊ပူဆွေးခြင်းတွေ၊ အာဃာတ အမုန်းတရားတွေဆိုတာ နဲသွားတာ သေချာသလောက်ရှိသွားပြီပေါ့ဗျာ၊
ဒီပဲယင်းခရီးစဉ်မှာ မလိုသူတွေက ၀ိုင်းရိုက်ကြတော့ အန်တီက ပြန်တုန့်ပြန်ဘို့ ညွန်ကြားခဲ့တာမှမဟုတ်တာ၊လုပ်သမျှခါးစည်းခံဘို့ပဲပြောခဲ့တယ်၊အဲဒါအကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ပေါ့၊ အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ဆိုတာ ခရီးရှည်ကောင်းရှည်နိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်အထိနည်းတယ်၊ ကမ္ဘာနဲ့လူထုကထောက်ခံတယ်၊အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးဘို့ဆိုတာတော်ရုံလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး၊
တလောက ငါးမင်းဆွေက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကိုလာရောက်ပြီး အန်တီစုကို စွပ်ဆွဲတာ တော်တော်များများသိပြီးသားကိစ္စတခုပါ၊ နိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားပိတ်စို့မှု့ လုပ်တဲ့ အရာပေါ်မှာ အကြမ်းဖက်မှု့လို့သူက တဘက်သတ်ပြောဆိုထားတယ်
ကျနော့်အမြင်လေးတခုတင်ပြခြင်တယ်၊ sanction ဆိုတာ အရေးယူပိတ်ဆို့ဆောင်ရွက်မှု့လို့ အကြမ်းအားဖြင့်မှတ်ထားလို့ရပါတယ် ( sanction ) ကိုအမှန်တကယ်ရုတ်သိမ်းလိုတယ်ဆိုရင် နှစ်ဘက်လုံးကတပြိုင်နက်ထဲလုပ်မှတရားမျှတမှာပေါ့နော၊sanctionကိုတဘက်သတ်ရုတ်သိမ်းခိုင်း မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်တရားမျှတပါ့မလည်း၊ တကယ်တော့ sanction ကို စစ်အာဏာရှင်များကလည်း အတိုက်အခံအင်အားစုနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ချမှတ်ထားတာပါပဲ။ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်း
တို့ဆိုတာတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရက ပြည်သူတွေအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့sanctionတွေမဟုတ်ဘူးလား ၊ ပမာပြောရရင် အန်တီစု အင်တာနက်လျှောက်တာကိုတောင်မှ ပိတ်ဆို့ထားတာဟာ အဲဒါ sanction ပေါ့ ဗျာ၊ အဲဒီတော့ တိုးတက်တဲ့ဖွံဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံတခုဆီကို ဦးတည်မယ်ဆိုရင် sanction ကိုတဘက်သတ် မဟုတ်ပဲ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေဘက်ကရော ဖွင့်ပေးဘို့လိုလိမ့်လေ၊ အဲဒါကို အတိုက်အခံဘက်က လိုက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အတိုက်အခံဘက်ကအဆိုးပေါ့၊တဘက်သတ်ကြီးကတော့မသင့်တော်ပါ ဘူး၊ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဟာတရားမျှတတဲ့ကိစ္စတခုပါဒါအကြမ်းဖက်မှု့လည်းမဟုတ်ဘူး၊ သူများကိုကြ လက်သီးနဲ့ထိုးခြင်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ကြမေးရိုးမဲ့ဖြစ်နေတာ လောကဓမ္မတာနဲ့ကြည့်ရင်.. မသင့်တော်ပါဘူး၊
လည်းတိုင်းပြည်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအန်တီစုနဲ့အမှန်တကယ် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားဘို့ အချိန်လေးက သာသာယာယာရှိနေဆဲပါ၊လူထုကရောနိုင်ငံတကာကရော မျှော်လင့်နေဆဲပါ၊အဲသလိုမဟုတ်ပဲမုန်တိုင်းထံတဲ့အချိန်ရောက်မှဆိုလျှင်တော့မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ် ကုန်မှာအမှန်ပဲဘယ်သူကမှလည်းအပြန်အလှန်ခွင့်လွှတ်ခြင်တော့မှမဟုတ်ဘူးကျနော်တို့ လူထုကလည်းနားလည်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အာဏာကိုလက်ဆုတ်လက်ကိုင် ယူထားတာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများပါ၊ တချို့အခွင့်အလမ်းများက တပြိုင်နက်ထဲ တောင်းဆိုလို့ ယူလို့မရတာရှိတယ် ( ဆရာအောင်သင်း အဆိုအမိန့်ပေါ့ ) ဥပမာ.. ကော်ဖီသောက်မလား မုန့်စားမလားဆိုရင် ကော်ဖီလည်းသောက်မယ်မုန့်လည်းစားမယ် နှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတယ်၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အိုခြင်းနဲ့ ရှင်သန်ခြင်းတစ်ခုခုကိုရွှေးပါဆိုရင်တော့ နှစ်ခုလုံးတပြိုင်နက်ထဲ ရွှေးလို့မရတော့ဘူး၊ မအိုခြင်ရင်သေ ( အုဝဲဆိုကထဲကသေလိုက်ရင်.. မအိုတော့ဘူး )၊ မသေခြင်ရင် အိုကိုအိုရမယ်၊ ဒီလိုပါပဲ၊ တိုင်းပြည်ကို အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်သွားမလား၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက် တုန့်ပြန်မလားဆိုတာမှာ တခုခုကိုပဲရွှေးချယ်ရတော့မှာဆိုတာကို လူထုက သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒီအဆင့်တွေမှာအချိန်လေးရနေပါသေးတယ်။ဒီထက်ကျော်လွန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်
တကယ်လို့ခေါင်းမာစွာနဲ့၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေအတိုင်းဆက်သွားမယ်၊ပုံစံမပြောင်းဆက်လက်ချီတက်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဟာအောက်ဆုံးအထိကျဆင်းသွားပြီးအငတ်ဆိုက်ပြသနာ တွေနဲ့ကြုံလာပါလိမ့်မယ် အခုလည်းကြုံနေရပါပြီဒါဆိုရင်လူထုကသီးခံနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး၊ အဆုံးစွန်အထိပေါက်ကွဲထွက်လာရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအတွက် ထွက်လမ်းပိတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမကြည်ညိုသော စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အားနည်းသောနိုင်ငံ၊ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူကြီးထွားနေသောယဉ်ကျေးမှု့ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကျနော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံအခင်အကျင်းကိုဘယ်နိုင်ငံ
ရင်းနှီးမြုတ်နှံနေတဲ့နိုင်ငံတကာဆိုတဲ့သူတွေကအသေးစားလေး တွေပါ၊ တိုင်းပြည်စီးပွားဦးမော့လာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး၊ တိုင်းပြည်စီးပွားဦးမော့လာဘို့ တရုတ် လောက်အားကိုးနေရုံနဲ့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ပြောပရစေ၊ အမေရိကံနဲ့အနောက်အုပ်စုမပါပဲတိုင်းပြည်စီးပွား ဦးမော့လာဘို့ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်မျှသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ နအဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဟစ်ကြွေးနေသလို ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာသယံဇာတပေါကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာတကယ်တော့တိုင်းပြည်တပြည်ကိုစီးပွား တိုးတက်လောက်အောင်အထိ ပေါကြွယ်ဝတာမဟုတ်ပါဘူး၊ အရေးကြီးဆုံးက လူသားအရင်းမြစ်ပါ ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံဟာ ဘာသယံဇာတမှမရှိပဲ နိုင်ငံတိုးတက်အောင်ထူထောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ စနစ်ကောင်း၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့၊ လူသားအရင်းမြစ်များကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုးဝါးလှတဲ့စစ်အာဏာရှင်များရဲ့စနစ်ဆိုးဒဏ်ကိုပြည်သူတွေတွင်မဟုတ်ပါဘူး၊ တပ်မတော်သားများလည်းခါးစည်းခံနေရတာပါ၊ တကယ်တော့ နအဖစစ်ခေါင်းဆောင်များကြီးဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ကျွှန်ပြုပြီး ထင်ရာကျဲနေတဲ့ သူတွေဆိုရင်ငြင်းကြဦးမှာလား၊ ဒီသဘောတရားကို တပ်မတော်ဟာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တနေ့စစ်အာဏာရှင်ကြီးများအ တွက် များစွာသော ပေးဆပ်မှု့များနဲ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်ဒီမိုကရက်တစ်အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေရယ်၊တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြု၊မြေပေါ်မြေ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/12/20100အကြံပြုခြင်း
မြ၀တီမှ တပ်မတော် သူရဲကောင်း
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့မှ ကုန်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင်နာမည်ကြီးလွန်းသော သော တံတားကျိူးဗျူဟာဗိုလ်မြတ်ဇော်ဦးဂိတ်သည် သောင်းကျန်းသူသူပုန်များနှင့် အဆက်အသွယ် ရှိုပြီး တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိူးအပေါ်မတရားဂုတ်သွေးစုပ်နေကြောင်းကို သတင်းရရှိပါတယ်…
မြ၀တီမြို့ ကုန်သွယ်ရေးဇုံတွင်ချစ်ကြည်ရေးတံတားပိတ်ထား၍ ထိုင်းနိုင်ငံမှကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူခွင့်မပြုဆိုသောကြောင့် ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများကို တရားမ၀င် ဘေးလှေဂိတ်များမှ တဆင့် စားကုန်၊ လူသုံးကုန်၊ စက်ဘီး၊ ကားနှင့် ဆိုင်ကယ်များကို နေ့စဉ်တင်သွင်းလျှက်ရှိနေပါသည်..ထိုပစ္စည်းများသည် တောလမ်းများမှတဆင့် သယ်ယူပြီး ပြည်တွင်း ဘားအံ၊ မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့များသို့ သယ်ဆောင်သည့်အခါဝယ် အမည်နာမ အမျိူးမျိူးတပ်ပြီး မှိူလိုပေါက်နေသော စစ်ဆေးရေးဂိတ်များကို ဂိတ်ကြေးများပေးကာသယ်ဆောင်နေရပါသည်…
ထိုများပြားလှသော စစ်ဆေးရေးဂိတ်များထဲမှ လုံခြုံရေးဂိတ်ဆိုသော တံတားကျိူး ဗျူဟာဗိုလ်မြတ်ဇော်ဦးဂိတ်သည် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော KNU အဖွဲ့ နှင့်ပေါင်းစားသော အဆိုးဝါးဆုံးဂိတ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတော့သည်…ဗိုလ်ကြီးမြတ်ဇော်ဦးသည် မယားငယ်အသွယ်သွယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိူးမျိူးနှင့် ပျော်ပါးရန်အတွက် KNU လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကို ဆက်ကြေးအဖြစ် ၁၂ ဘီးယာဉ်ကြီး ၂ စီး ကိုအခမဲ့ ဖြတ်သန်းခွင့် ကို ကွင်းကလေး ဥက္ကဌ ဇနီးမှတဆင့်ပေးကာ ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်မူမှ ကာကွယ်ထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်…
နေ့စဉ် ၁၂ ဘီးကားတစ်စီး - ၂၅ သိန်း
၁၀ ဘီးကားတစ်စီး - ၂၀ သိန်း
၆ ဘီးကားတစ်စီး - ၁၅ သိန်း နှူန်းဖြင့် ယာဉ်ကြီးအစီးရေ ၇၀ ကျော် မှ ကောက်ခံလျှက်ရှိပြီး…
ယာဉ်ငယ်အစီးရေ ၃၀၀ နီးပါးထံမှ တစ်စီးကို ၆ သောင်းကျပ်မှ တစ်သိန်းခွဲ အထိ ကောက်ခံနေပါသည်…အဆင်းနေ့တစ်နေ့ထဲမှာပင် သိန်းတစ်ထောင်ကျော် ရနေသောသူအဖို့ တပ်မမှူးများ၊ ဗျူဟာမှူးများ၊ ကိုလိုသလို ထိန်းချူပ်နိုင်ပြီး မိန်းမငယ်လေးများကိုလည်း လချူပ်- နှစ်ချူပ်နှင့်ယူပြီး ပျော်ပါးနေသည်ကို အထက်လူကြီး များသိသိလျက်ပင် မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေကြသည်..
ကျော်မွဲမျက်နှာငယ်ကုန်သယ်များအား အတင်းအဓ္ဓမ ညှင်းပနုးနှိပ်စက်ရန်အတွက် တပ်ထိန်းများကိုတာဝန်ပေးထားပြီး နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေကြေးများကို အသုံးပြုပြီး KNU ကိုဆက်ကြေးပေးပြီး ဂိတ်ဖွင့်စီးပွားရှာသော တပ်မတော် ဗိုလ်ကြီးမြတ်ဇော်ဦးသည် ၂ ဖက်ကြားမှ ခွချက်နေသော တပ်မတော်သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်နေပြီ ဆိုသည့်အကြောင်းကို ပြည်သူများသိအောင် တင်ပြလိုက်ရပါသည်…
" မာရ်နတ်မင်း နှင့် ကာလီမာန်မယ်တော်၏ စပ်ကျသားများ ထုထောင်းဂိတ် "
မယ်တော်ကာလီမာန် ။ ပူးကပ်ဟန်နှင့် …
လက်တံခြောက်ဘက် ၊ မာ၇်နတ်စွက်တော့ …
၇ှုတ်ယှက်လက်များ ၊ထောင်ကျော်သွားခဲ့ …
ကားသမားမျက်နှာ ၊ ငို၇၇ှာသည်။ ဘယ်မှာဖြစ်ပွါးနေပါလ်ိမ့်……။
*သြော်..သြော်..သြော် ၊ေ၇ာ်ကဲနယ်ခံ ၊ အာမမခံနှင့် ၊ ကာစတန် လ၀က ၊ မထသ မှ နကသ ကုန်/ယာ ၊စိုက်/မွေး ပါခဲ့ ၊ကျန်းမာ တပ်ထိန်း ၊ ငကျားငြိမ်း နှင့် ငစိမ်း ညွှန်မှူး ၊ ဗျုဟာ၇ူး မှ ၊ယစ်/မှူး SB ၊လက်ဝါးစီသည် ၊မြ၀တီ .... ထုထောင်းဂိတ်မှာကို။။
( မင်းညီသြ )